Nongedzo yeKutarisa Akaunti Yekutengesa | Martech Zone
Kuona izvo Demandbase isa pamwechete iyi infographic, uchifananidza kushambadzira kwetsika B2B ku target account kushambadzira zvinonakidza. Nepo kushambadzira kwakawanda kuchishanda kuendesa vanhu chaivo kune yako saiti, kuchine chimiro chiripo kune wako akakodzera mutengi chinofanirwa kuteedzerwa. Kuziva vanhu vanosvika panzvimbo yako uye kuwana iyo dzidz (bhizinesi hunhu) data pane yavo indasitiri, zera, mari, huwandu hwevashandi, nezvimwe zvinogona kukubatsira kuti uise pamberi pekuedza kwako kubuda.
Shanduko yedhijitari yakachinja zvachose mabatiro evatengi vebhizinesi nevatengesi, asi vatengesi vanoramba vachitengesa nenzira imwechete yechinyakare. Ehezve, ivo vari kubhadhara mutengo wekutadza kuvandudza: kushandisa zviuru nezviuru zvemari zvisina basa madhora ekutengesa pazvinangwa izvo zvisingazombo shandure. Saka ndezvipi zvimwe? Target Akaunti Kushambadzira. Mhinduro yekupedzisira-kumagumo inoita kuti iwe ugone kuona ako maakaunzi maakaunti uye kushambadzira chete kune iwo maakaundi mudanho rega rega mune faneli. Demandbase
Demandbase ndipo panowanikwa Dhijitari Kuvapo neAccount-Yakavakirwa kushambadzira, ichibvumira vashambadzi veB2B kunongedza vateereri vavo vanokosha uye kugadzirisa ruzivo kuti zviitwe zvibudirire uye zviwande.
Tags: b2b kushambadzirabhizinesi kune bhizinesidemandbasedzidztarget account kushambadzira